कसरी दुख्छ टाउको ? उपचार कसरी गर्ने - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी दुख्छ टाउको ? उपचार कसरी गर्ने
कसरी दुख्छ टाउको
धेरै मानिसको भ्रम के छ भने टाउको दुख्नु भनेको गिदी दुख्नु हो। वास्तवमा गिदीमा कुनै संवेदना पुर्याउन सक्ने क्षमता नै छैन। चिकित्सकहरूको अनुसार गिदीको शल्यक्रिया गर्दा यसलाई ‘एनेस्थेसिया’ अर्थात् संवेदनाश गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
टाउको दुखाइ गिदीभन्दा बाहिर रहेका ‘रिसेप्टर’ हरूको उत्तेजनाबाट हुने हो। र, मांसपेशीहरू हाम्रो मस्तिष्क तनावयुक्त भएका बेला बढी कसिने गर्छन्। त्यस्तै रिसेप्ट्रहरू टाउकोका अरू विभिन्न भागहरूमा हुन्छन्, जस्तै छाला, आँखा, कान, जोर्नी, दाँत, जिब्रो, साइनस (हाडभित्र हावा भरिने ठाउँ), मेरुदण्डका माथिल्ला हाडहरू आदि। चस–चस घोच्ने, कञ्चटमा चट्किने, टाउको भारी भइरहने, टाउको पोलेको–पोलेकोजस्तो हुने आदि विभिन्न प्रकारले टाउको दुख्ने गर्छ।
टाउको दुल्नु आफैंमा रोग नभई विभिन्न रोगको लक्षण हो। त्यसैले उपचार पनि सोहीअनुसार गरिनुपर्छ। कुनै रोगको लक्षणको रूपमा उब्जिएको टाउको दुखाइ त्यो रोगको उपचारपछि निको हुने हुन्छ। ‘पेन किलर’ मात्र खाइरहने हो भने त्यसको नकारात्मक असरको भार वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
टाउको दुखाइको उपचारका लागि अहिले नेपालमा पनि केही मनोवैज्ञानिक केन्द्रहरू खोलिएका छन्। यी केन्द्रहरूमा ‘रिल्याक्सेसन’ का विभिन्न विधिहरूद्वारा उपचार गरिन्छ। त्यस्ता उपचार प्रविधिहरूद्वारा दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण सफलता मिल्न सक्छ।